Myanmar Defence Weapons: တပ်မတော် ဘာလဲ...ဘယ်လဲ....၁၅
၂၀၀၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်နေ့ညနေ ၃နာရီ လောက်မှာ နမ့်စန် လေတပ်စခန်းရဲ့ 
ပြေးလမ်းထိပ်မှာ အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ တပ်မတော်(လေ)ရဲ့ Super Galeb G4 အမျိုးအစား တိုက်လေယာဉ် အုပ်စုဟာ လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့လေထဲကို တဟုန်ထိုးပျံတက်သွားပါတယ်…..။
ဒီ တိုက်လေယာဉ်အုပ်စုဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ မိနစ်ပိုင်းကပဲ ကက(ကြည်း)ရဲ့တိုက်ပွဲဝင် အသင့် အမိန့် ကို လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး ထပ်ဆင့်ဆိုသလို ကက(လေ)ရဲ့ စစ်ဆင်ရေးအမိန့် ကိုပါ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ လေသူရဲအားလုံးဟာ မြေပုံခန်းက အထွက်မှာတော့ သူတို့ တိုက်ခိုက်ရမယ့် ပစ်မှတ်ကို …..
သူတိုဟာ…ယိုးဒယား မြန်မာ နယ်စပ် အို7တောင်ကုန်း တစ်ဝိုက်မှာ …..ရှေ့ တန်းအမှတ် ၃၅၉ ခြေလျင်တပ်ရင်း နဲ့ …..တိုက်ပွဲ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြစ်ပွားနေတဲ့…… ယိုးဒယား တင့်ကားတွေ ကို
လေကြောင်းပစ်ကူနဲ့ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရတော့မှာပါ …ဒါဟာ …၂၀၀၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်နေ့ မှာစ ခဲ့တဲ့ ….ယိုးဒယား မြန်မာ နယ်စပ်တင်းမာမှုအရေး …..ပေါက်ကွဲသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်….....။
အို7 တောင်ကုန်းဟာ တာချီလိတ်မြို့ပုန်းထွန်ရပ် ရဲ့ အရှေ့ တောင်ဘက် ….ယိုးဒယားနိူင်ငံ မယ်ဆိုင်မြို့ နဲ့ ကိုက် ၂၅၀၀ အကွာလောက်မှာ တည်ရှိတဲ့ တောင်ကုန်းဖြစ်ပြီး ၁၉၉၅ မှာ MTA အဖွဲ့ တွေက
တောင်ကုန်းပေါ်ကနေ လက်နက်ကြီးနဲ့တာချီလိတ်မြို့ ကိုလှမ်းပစ်ပြီးကတည်းက တပ်မတော်က တပ်စုတစ်စုဟာ တောင်ကုန်းပေါ်မှာ အမြဲတန်း တပ်စွဲနေခဲ့ ပါတယ်….။
အဲဒီတပ်စုရဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုဟာတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့ မှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရပါပြီ ……။
ခလရ ၃၅၉ က တပ်စုမှူး ဒုအရာခံဗိုလ်ကျော်ဌေးဟာ ကွပ်ကဲမှု စစ်ကြောင်းထံ ဆက်သွယ်ရေးစက်နဲ့အခြေအနေအားလုံး သတင်းပို့ နေပါတယ်။ ယိုးဒယား နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့ ဝင် ၂၀ လောက်ဟာ စခန်းနဲ့ ကိုက်၂၀၀ အကွာမှာနေရာယူထားပြီး ယိုးဒယားစစ်တပ်က ဗိုလ်ကြီး ယိုးထင် ခေါင်းဆောင်တဲ့ 
အင်အား ၄၀ လောက်က သူတို့ ကို စခန်းက ဆင်းသွားဖို့ အမိန့် ပေးတဲ့ အကြောင်းပါ…..။
တပ်စုမှူး က ငြင်းဆန်ခဲ့ ပြီး တစ်နာရီလောက် အကြာမှာတော့ ယိုးဒယားတပ် ဖွဲ့ ဝင် ၁၀၀ လောက်ဟာ v-150 သံချပ်ကာယာဉ် ၂စီး၊ M60 တင့်ကား လေးစီး၊ ၁၂၀မမ အမြောက်တင် သံချပ်ကာ ၂စီးတို့ နဲ့ ဆိုက်ရောက်လာခဲ့ ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ တပ်မတော်ဘက်ကလည်း ခလရ ၃၅၉ က တပ်ခွဲ ၂ ဟာ ရင်ဆိုင်တပ်ဖြန့် နေရာယူနေပါပြီ….။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက်နေ့ မှာတော့ ယိုးဒယားတပ်ဖွဲ့ ဝင် သုံးရာခန့် ဟာ အတွဲလိုက်ဒုံးပစ်စင် MLRS စနစ်တင် သံချပ်ကာကား ၃ စီး၊ တင့်ကားများနဲ့ အတူထပ်မံအင်အားဖြည့်တင်းခဲ့ပြီးတပ်မတော်ဘက်ကလည်း ခလရ၃၅၉ က စစ်ကြောင်း၂ တစ်ကြောင်းလုံး ၀င်ရောက်နေရာယူခဲ့ ပါတယ်…..။
ယိုးဒယားလေတပ်မှ ဗုံးကြဲခဲ့သည့် နေရာ
နှစ်ဖက် အပြိုင်တင်းမာနေတဲ့ အခြေအနေဟာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ရက်နေ့ မှာတော့ နှစ်ဖက် ပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့ အတူ ပေါက်ကွဲသွားခဲ့ပါပြီ။နှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေကြ Cobra Gold စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုဟာ ဒီနှစ် ချင်းရိုင်းဒေသမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ တာဖြစ်လို့ နယ်စပ်တစ်ဝိုက် အသင့်ရှိနေတဲ့ ယိုးဒယားသံချပ်ကာတပ်များဟာ
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာဒေသကို အမြန်ဆုံး မောင်းနှင်လာနေသလို တြိဂံဒေသတိုင်းထဲက တပ်မတော် ခြေလျင် တပ်ရင်းတွေဟာလဲ စစ်ကူချီတက် လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်....။
တိုက်ပွဲအဟုန်ကို မြင့်တက်သွားစေတာကတော့ ဖေဖေ၀ါရီ ၂၁ ရက်နေ့ မှာ လွယ်တော်ခန်းစခန်း၊
ဧပြီ ၂၂ ရက်နေ့ မှာ ပါချီးစခန်းနှင့် ၂၃ ရက်နေ့ မှာ နယ်စပ် ဘီပီ 1 စခန်းတို့ ကို ယိုးဒယား နိူင်ငံအခြေစိုက် SURA ရွက်ဆစ်အဖွဲ့နဲ့ ယိုးဒယားစစ်တပ် ပူးပေါင်းပြီး ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်တာပါပဲ......။
သာလွန်အင်အားသုံးပြီး တပ်စုအဆင့် စခန်းလေးများကို ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်စခန်းများကျဆုံးသွားချိန်မှာတော့ နှစ်နိူင်ငံ အမြောက်တပ်တွေဟာ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီး အပြင်းအထန်ပစ်ခတ်နေကြပါပြီ....။
ဖော်ဖေ၀ါရီလ ၁၁ရက်နေ့ယိုးဒယား ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီး ပစ်ချခံလိုက်ရတဲ့ နောက်မှာ ယိုးဒယားဖက်က F5 E အမျိုးအစား , F 16 အမျိုးအစား ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေကို စတင်အသုံးပြုလာပြီး တပ်မတော်ဘက်ကတော့ G4အမျိုးအစား Ground Attack တိုက်လေယာဉ်တွေကိုသုံးစွဲခဲ့ ပါတယ်…..
ဝေဟင် တိုက်ပွဲတွေ မဖြစ်ပွားခဲ့ ပေမယ်လည်း နှစ်ဖက်လုံးက
လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုလုပ်ခဲ့ ကြပြီး ယိုးဒယား လေတပ် ကတော့ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု အကြိမ် ၇၀ ခန့် ပြုလုပ်ခဲ့ ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ ပါတယ်………။
တိုက်ပွဲကာလ နောက်ပိုင်းတွေမှာ တာချီလိတ်နဲ့ မယ်ဆိုင်မြို့ များအတွင်းကို နှစ်ဖက် အမြောက်များ အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်ခဲ့ ကြပြီး အရပ်သားသေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်တွေပါ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ မှာတော့ O7 ကုန်းကို ၀ိုင်း တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ယိုးဒယားတပ်တွေကို တန်ပြန်ထိုးစစ်ဆင်နွှဲ ခဲ့ကာ မောင်းထုတ်နိူင်ခဲ့ ပေမယ့် ကျထိန ၊ပါချီး ၊လွယ်တော်ခန်း ၊လွယ်မဆုတ် ၊ လွယ်ခန်းရှိုး စတဲ့ စခန်းအတော်များများကတော့ ဇွန်လ ထဲမှပဲ ပြန်လည် သိမ်းပိုက်နိူင်ပါတော့တယ်…….။
တပ်မတော်မှ ဝယ်ယူခဲ့သည့် မစ်-၂၉ တိုက်လေယာဉ်များ
ဒါဟာ တပ်မတော်အဖို့ တော့ သူအမြဲ သတိထားစောင့်ကြည့်ရမယ့် အိမ်နီးချင်းတစ်ယောက်
ရှိနေတယ်ဆိုတာ သတိပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး နောက်တစ်နှစ်မှာပဲ ယိုးဒယားလေတပ်ရဲ့ F 16 တိုက်လေယာဉ်များကို ယှဉ်ပြိုင်နိူင်ဖို့ MIG 29 ခေတ်မီ တိုက်လေယာဉ် နှစ်အုပ်ကို ရုရှားနိူင်ငံက ၀ယ်ယူခဲ့ ပါတယ်……။တကယ်လဲ သူထင်သလိုပဲ နယ်စပ်ပြသနာဟာမပြီးသေးပါဘူး နောက်ထပ် ၁၀လ အကြာမှာ ပန်မိုင်ဆွန်ဒေသ ခြေကုပ်စခန်းများအားလုံးကို ယိုးဒယားစစ်တပ်ရဲ့ ပစ်ကူနဲ့SURA အဖွဲ့ က ထိုးစစ်ဆင်တော့မှာဖြစ်သလို အခုတိုက်ပွဲစဉ်တွေထက် ကျယ်ပြန့် တဲ့ တိုက်ပွဲတွေကိုလဲ အချိန်အတော်ကြာ ဆင်နွှဲရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်…..။
Posted by MM at 2:55 PM
Emc Prince June 13, 2013 at 8:38 PM
Arkar Soetint June 13, 2013 at 9:07 PM
Yeyanniang June 14, 2013 at 12:14 AM
Thank you,for Maps, proud of MAF & Myanmar Army.
kaung kaung June 14, 2013 at 10:03 AM
Si Mon June 15, 2013 at 3:24 AM
What were the RTAF's F16s doing at that time? Were they scared Super Galeb 4s for dog fight? I seriously do not think so..
Min Aung June 16, 2013 at 12:03 PM
ယိုးဒယား မြန်မာ နယ်စပ် အို7တောင်ကုန်း တစ်ဝိုက်မှာ …..ရှေ့ တန်းအမှတ် ၃၅၉ ခြေလျင်တပ်ရင်း နဲ့ …..တိုက်ပွဲ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြစ်ပွားနေတဲ့…… ယိုးဒယား တင့်ကားတွေ ကို
လေကြောင်းပစ်ကူနဲ့ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရတော့မှာပါ ??
How many tanks did they destroy?
yeyan paingtoe July 4, 2013 at 8:08 PM
အစ်ကိုရေအသစ်လေးတင်ပေးပါဦး ကျွန်တော်က အစ်ကို ပရိတ်သပ်ပါ လိုင်ပေါတက်တိုင်အစ်ကို ဆိုဒ်ကိုအရင်ဖွင်တာ ကျွန်တော်တိုတပ်အကြောင်းသိခြင်လို အစ်ကိုတင်ပေးနေတာတွေအတွက်ကျေးဇူးပဲ
Pyay Htet November 19, 2013 at 8:32 PM
continue to write, brother